China SEBIC enduro mid n'ịnyịnya moto okporo ụzọ ebikes ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Funncycle
SEBIC enduro mid n'ịnyịnya moto n'okporo ụzọ ebikes
Ọ dị mma ịga ngwa ngwa, mana ọ bụ naanị ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ahụ iru ala. N'ụzọ dị mwute, ọsọ na nkasi obi anaghị adịkarị ọnụ, mana RH28MM pụtara ịgbanwe nke ahụ.
Akụkụ ụkwụ 28 ″
Moto Brushless, 36V 250W M420, BAFANG
Nọmba nlereanya BEF-RH28MM
Ụba 28 * 2.0 ″ alloy alloy 6061, TIG gbanye
Ndụdụ SUNTOUR nkwusioru 28 * 2.0 ″, Alloy + Alloy
Breeki Hydraulic Disc Breeki
Taya CST 28 * 2.0 ″ A / V Nwa
Gear Ntọala 8speed
Batrị 36V 11.6AH, Lithium Batrị, na 2A chaja-SANS
Ọ dị mma ịga ngwa ngwa, mana ọ bụ naanị ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ahụ iru ala. N'ụzọ dị mwute, ọsọ na nkasi obi anaghị adịkarị ọnụ, mana RH28MM pụtara ịgbanwe nke ahụ. Site na jiometrị dị mma, nke mara mma, nkecha mara mma, yana naanị teknụzụ anyị na-emeri, ị ga-enweta ike ọzọ nke ga-eme ka ịnya ịnyịnya dịka ọ na-arụ ọrụ.
Malite site na igwe eji arụ ọrụ pụrụ iche, ọ na-egosipụta ụda na-ebute arụmọrụ. Nke a pụtara obere oke torque na mmepụta kacha. N'ezie, ọ ka na-egosi atụmatụ arụmọrụ dị jụụ na Custom Rx Street Tune nke na-ewepụta mmepụta ma mee ka ọ bụrụ ihe kachasị baa uru maka gburugburu obodo. Chee echiche banyere ya otu a: Ka ị na-enwekwu ike ị na-ewepụ, ike ya ka moto ahụ na-ewepụ, nke a na-emekwa ka osiso osiso site na nkwụsịtụ, sịnụ, ọkụ ọkụ na-aga ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Igwe akwara belt ahụ dịkwa mma, dị jụụ, na enweghị mkparịta ụka na-akpasu iwe. Na max ọsọ? 28mph.
Maka RH28MM, anyị mepụtara batrị pụrụ iche nke na-enweghị ihe jikọrọ ya na etiti ahụ, enwere ike ịgbanwu agbachi, na-ewepụ ngwa ngwa maka ịgba ụgwọ dị mfe. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, e nwere ọtụtụ mmiri ị ga-eji mee ka ibuga gị na ọrụ gị, ịga njem n’ụlọ ahịa nri, ma ọ bụ gaa na kọfị ọhụrụ ahụ n’ofe obodo ahụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ etu ị ga - esi na - akwụ ụgwọ, lee anyị anya Calculator Turbo nso maka atụmatụ ziri ezi.
Nke gara aga: SEBIC High power nwaanyị ụzọ ebike
Osote: SEBIC Nkwalite 20 nke anụ ọhịa na-emegharị igwe eletriki igwe eletriki